विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन् – साइन्स इन्फोटेक
मार्च 11, 2017 नोभेम्बर 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक5Comments रक्सी, विवाहित महिला
विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन् ! सामन्यतया नेपालीमा साधारण घरायसी प्रयोगमा पिइने नशालु पदार्थलाई रक्सी भनिन्छ। तर आजको यो विश्वव्यापीकरणको युगमा उक्त परिभाषा एकदमै साघुरो हो । आजकल थरिथरिका विभिन्न ब्रान्डका प्रसिद्ध रक्सीहरु नेपालमा पनि पाइन्छन । रक्सीको सेवन प्राचीनकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई विभिन्न परिस्थिति र समयमा विभिन्न उपनाम जस्तै: सोमरस, अङ्गुरको छोरी इत्यादिले पुकारिन्छ । आजको बदलिंदो सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिको कारण व्यक्तिको रहनसहन तथा खानपिनमा परिवर्तन आएको छ । रिक्सा चलाउने मजदुरदेखि उच्च ओहदाको अधिकृत र राजनीतिज्ञले समेत रक्सीको आनन्द लिइरहेको हुन्छ ।
विवाहपछि महिलाहरुलाई घरव्यवहारले चेँप्छ । त्यसकारण महिलाहरु बढि व्यवहारिक हुन्छन् र अल्लारे प्रवृत्ति छाड्छन् भन्ने हामी सबैको अनुमान हुनसक्छ । तर अरु विषयमा जे होला, रक्सी पिउने मामिलामा भने बिहे गरेपछि महिला झनै अल्लारे बन्छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययनले विवाहपछि महिलाले बढि मदिरापान गर्ने देखाएको छ । अध्ययन अनुसार विवाहित महिलाले अविवाहित महिला तथा डिभोर्स गरेका महिलाले भन्दा बढि मदिरापान गर्छन् ।
तर पुरुषहरुको मामिलामा भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । अर्थात् विवाहपछि पुरुषहरुको रक्सी खाने दर केही घट्छ । वास्तवमा महिलाहरुले विहेपछि रक्सीको दर बढाउनुको कारण आफ्नो पार्टनरको दाँजोमा पुग्ने प्रयास गर्नु हो । उता विवाहित पुरुषले पनि कम रक्सी खाने आफ्नी पार्टनरको दाँजोमा पुग्न रक्सीपानको मात्रा घटाउँछ । अमेरिकाको सिन्सीनाटी विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुका अनुसार डिभोर्सपछि भने पुरुषको रक्सी खाने दर ह्वात्तै बढ्छ ।
तर अचम्म मान्नु पर्दैन कि ‘जब दम्पतीले सँगै एक वा दुईवटा मदिराको बोतल खोलेर खान सुरु गर्छन्, त्यसबेला बुझ्नुपर्छ श्रीमतीले श्रीमानले भन्दा बढि रक्सी स्वात्तै पारिदिन्छिन्’, अध्ययनकर्ता एमीली रोविन्सनको भनाइ छ । स्मरण रहोस् यो अध्ययनको प्रतिवेदन अमेरिकन सोसियोलोजिकल एसोसिएसनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
← यस्ता आँखा हुनेसँग सधै बच्नुस्
होली पर्व र यसको महत्व →
जनवरी 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
सामाजिक बहस – “नेपाललाई मदिरामुक्त बनाउनुपर्छ” भन्ने सामाजिक बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
मार्च 8, 2018 मार्च 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
5 thoughts on “विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन्”
Pingback: यस्ता छ थाहा पाउनुहोस् रक्सी सेवनका नकारात्मक असरहरु
Pingback: होशियार ! जान्नुहोस् यस्तो छ रक्सीबाट स्वास्थ्यमा हुने क्षति
Pingback: थाहा छ तपाईलाई यसकारण रक्सी पिएपछि मानिसलाई मात लाग्ने गर्छ
Pingback: खुसीको खवर ! अव चिन्ता नलिनुहोस् ,यस्तो छ : रक्सी छोडाउने औषधि र उपचार
Pingback: जान्नुहोस् ! रक्सी पिउँदा शरीरको तापक्रम बढ्नुको सट्टा घटछ